Shina silika o-peratra fanamboarana sy orinasa | Jujie
Fantsom-bolo vita amin'ny fiberglass
Vola vita amin'ny silipo vita amin'ny satroka
Vokatra vita amin'ny silika voarary
Peratra famehezana silika voasaraka
Tapezy famehezana silika
Tselatra fametahana tena manokana amin'ny silika
mainty, fotsy, mena, maitso, sns
fenitra sy tsy fenitra
Fanoherana ny maripana:
varavarana sy Windows, milina, hafa
Silika o-peratra sy gasket silikola
Tombony azo amin'ny vokatra
Tombony azo avy amin'ny vokatra: 1. Famirapiratra tsara eto ambonin'ny.
2. Maharitra tsara.
3. Tombo-kase tsara kokoa.
4. Insulation, mari-pana ambony.
5. Ny teknolojia dia matotra, milamina kalitao.
6. Azo namboarina faritra tsy fenitra.
7. Ny habeny marina.
Entana fitsapana Unit Precipitation fomba silica gel
hamafin'ny Shore A 70 50
Faharetana amin'ny sintona Mpa 7.6 7.6
Elongation % 280 430
Herin'ny ranomaso Kn / M 22.7 21,6
Fampidirana ny singa famehezana silika
Fitaovana silika 100%
Durometra amoron-dranomasina A 30shoreA-80shoreA
Diameter haben'ny laharana Azo namboarina
Fanoherana ny maripana
-60 ° C — 280 ° C (manokana)
Bika Aman 'endrika
Wall hatevin'ny fantsona dia mitovy
malamalama, tsy misy triatra,
tsy misy bubble rivotra, tsy misy fahalotoana,
tsy misy fofona ary tsy misy poizina.
Fanamarihana: 1. Ny data rehetra dia matetika ampiasaina.
2. Loko manokana, savaivony manokana, sns
Jiangyin Jujie Rubber & Plastic Co., Ltd, natsangana tamin'ny 2007, dia orinasa manavao izay manokana amin'ny fanamboarana sy fampandrosoana ny silicone entana. Izahay dia manamboatra fantsom-pandehanana silipo avo lenta, fantsona fanamafisam-peo silika ary singa famehezana ho an'ny indostrian'ny herinaratra, elektronika, jiro, fanafody, sakafo, simika, fiara, fanamboarana sambo ary indostrian'ny milina.
Ireto ny vokatra samihafa kokoa an'ny orinasanay, toy ny silket gasikara, fantsom-bolo vita amin'ny fiberglass, fantsom-bika amin'ny silipo, fantsom-bika, silika vita amin'ny silika mihosotra, fantsom-piraketana miampita tena, sns.
Azonao atao ny manindry ny sary etsy ambany raha te hahalala bebe kokoa.
Fanontaniana napetraka matetika
1. Rahoviana aho no mahazo ny teny nalaina?
Matetika izahay dia mitanisa ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fanontanianao. Raha maika ny hahazo ny vidiny ianao, azafady miantso anay na lazao aminay amin'ny mailakao fa hoheverinay ho laharam-pahamehana ny fanontanianao.
2. Ahoana no fomba ahazoako santionany hijerena ny kalitao?
Hanome anao ny santionanay efa misy izahay hijerena ny kalitaonay, fa ny vidin'ny fandefasana kosa dia mila aloanao.
Na aorian'ny fanamafisana ny vidiny dia azonao atao ny mangataka santionany hijerena ny kalitaonay, fa ny vidin'ny santionany kosa dia mila aloanao .ary ny vidin'ny santionany dia azo averina raha toa ka mahatratra ny fangatahanay ny habetsahan'ny kaontinao.
3. Ahoana ny amin'ny fotoana itarihana ny famokarana betsaka?
Raha ny marina dia miankina amin'ny habetsahan'ny filaharana sy ny vokatra ilainao izany. Amin'ny ankapobeny, manoro hevitra izahay ny hanombohanao fanontanina iray volana alohan'ny daty tadiavinao ireo vokatra.
4. Inona ny fe-potoana alefanao?
Manaiky EXW, FOB, CIF, sns ianao. Afaka misafidy ny iray izay mety indrindra aminao na mahomby indrindra ianao.
Gasket silika vita amin'ny kofehy vita amin'ny silika
Previous: Industrial -Grade EPDM Silicone Foam Sheet / Sakafo Kilasy Silipo fantsom-pifandraisana silipo fantsona mihena hafanana
Manaraka: satroka silika vita amin'ny silika
gasikara vita amin'ny silika o-peratra manokana
peratra tombo-kase silicone ho an'ny mpanafana rano amin'ny masoandro
hafanana vita amin'ny silipo vita amin'ny silika ary tombo-kase
gasket silikona mazava tsara ho an'ny jiro
fiara faritra silicone o peratra ho an'ny famehezana mekanika
silika tombo-kase o-peratra
345, South Jingyang Road, Qingyang Town, Jiangyin, Wuxi, Jiangsu, China